Umenzi we China Optical Brightener OB kunye noMthengisi | BGT
Ukukhanya kwe-Brightener OB
Ukukhanya okuKhanyayo I-OByongezwa kwizinto ezininzi ukunciphisa ubumthubi, ukuphucula ubumhlophe, kunye nokuqaqambisa imveliso. Isetyenziswa ngokubanzi kwimarike yeplastiki. Ngenxa yesakhono sayo esihle sokuqaqamba, uzinzo olushushu lwe-thermal, kunye nokuhambelana neepolymers ezininzi.
Umgubo oqaqambileyo oluhlaza otyheli
Ukwenza mhlophe okufanelekileyo kunye nokuqaqamba kwesiphumo somxube weplastiki ye-polyester. Ingakumbi kwiintlobo ezahlukeneyo zeemveliso zeplastiki ezinjengePET, iPP, iPC, iPS, i-PE, iPV. Kodwa kulula ukufuduka kwi-PE kunye neplastiki enobushushu obusezantsi.
Igubu le-25kg yefayibha ene-liner ye-PE.
Umbala otyheli okhanyayo okanye ubisi omhlophe
Iarhente emhlophe elungileyo ye-PVC, i-PS, i-PE, i-PP, i-ABS, iiplastikhi ze-thermoplastic, i-acetate fiber, ipeyinti, ukutyabeka kunye ne-inki yokuprinta, njl.
Ukukhanya komgubo wekristale otyheli
Iziphumo ezimhlophe mhlophe zeeplastikhi kunye neemveliso zeplastikhi, ezinjengePV, iPolypropylene, iimveliso zeplastiki ezikumgangatho ophezulu ongafihliyo. Isiphumo esimhlophe sigqwesileyo. Ingakumbi isicelo kwiimveliso ezithambileyo zePVC.
(Sokumakishwa: Ulwazi lweemveliso zethu lusetyenziselwa kuphela. Asinaxanduva lwazo naziphi na iziphumo ezingalindelekanga okanye imbambano yelungelo elilodwa lomenzi ebangelwe yiyo.)
Umsebenzi we-Optical Brighteners ngokufunxa imitha ye-ultraviolet kunye nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhutshiweyo kuya kunciphisa umbala omthubi wepolymer. Phambi kwearhente emhlophe, enje ngeTiO2, ukusetyenziswa kwe I-OB-1 uya kuvelisa umbala omhlophe oqaqambileyo okanye "umhlophe kunomhlophe".
Ummeli weBrightener Agent I-OB sisisindo esiphezulu se-molecular brightener ekhanyayo yeklasi ye-thiophenediyl benzoxazole, efanelekileyo ekukhanyeni kwe-polymers ebonakalayo kuwo onke amabakala okucutshungulwa.
Inkqubo ye- I-CBS-127 yi-Optical Brightener esebenzayo kwiipholima, ngakumbi iimveliso zePVC kunye nefenylethylene. Ingongezwa kwiipholima njenge-pigment. Umbala omhlophe oqaqambileyo uya kubonakala kwiimveliso ukuba zisetyenzisiweI-CBS-127Kunye neatase titania. Uxinzelelo lweI-CBS-127 kufuneka wongeze ukuba i-rutile anatase titania izakusetyenziswa.
Egqithileyo Ukususa inki BT-300
Okulandelayo: Ukukhanya kweBrightener CBS-127